HARENA AN-KIBON’NY TANY : Nentanin’ny minisitra hanara-dalàna ireo mpandraharaha ao Antsirabe
Nanatanteraka fidinana tampoka tao amin’ny Renivohitry ny Faritra Vakinankaratra ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Fidiniavo Ravokatra, ny zoma 05 jolay 2019 lasa teo iny. 9 juillet 2019
Niara-dia taminy ny Tale Jeneralin’ny Agence Nationale de l’Or (ANOR), ny Tale Jeneraly mpisolo toerana eo anivon’ny « Laboratoire National des Industries Extractives » (LNIE), ny Talen’ny fitantanana ny mpiasa, ny talen’ny harena an-kibon’ny tany mpisolo toerana eto Analamanga ary ny Talen’ny « Bureau des Cadastres Miniers » (BCMM) Vakinankaratra. Raha vao tonga tao Antsirabe ny delegasiona notarihin’ny Minisitra Fidiniavo Ravokatra dia nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana ny lehiben’ny Faritra.
Nandritra ny fihaonana no niresahan’ny lehiben’ny Faritra ny fisian’ny tetikasa novatsian’ny « Suisse » vola. Tetikasa izay nametraka tahirin-kevitra ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an’ny Faritra Vakinankaratra ka tafiditra ao anatin’izany ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Ireo tahirin-kevitra voangona avy any ifotony no hampiakarina ao Antsirabe ary havadika ho saritany. Azon’ny daholobe jerena io saritany io ary indrindra ampiasain’ireo tompon’andraiki-panjakana ao amin’ny Faritra, manampy azy ireo amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra. Nilaza anefa ny lehiben’ny Faritra fa efa tapitra ny taona 2015 io tetikasa io ary nijanona teo amin’ny taona 2014 ny tahirin-kevitra farany. Avy eo, nihazo ny toeram-piasan’ny Talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany ao Vakinankaratra ny delegasion’ny Minisitera foibe. Nandritra izany dia hita fa manana trano ny Minisitera saingy tsy misy mpiasa miasa. Manoloana izany, nanome vahaolana ny minisitra fa “hamboarina ny fomba fiasa eo anivon’io sampandraharaham-paritra io.
Hapetraka eto Vakinankaratra ny rantsamangaikan’ny Minisitera foibe, toy ny ANOR sy ny Polisin’ny harena an-kibon’ny tany mba hanara-maso sy hanentana ireo mpisehatra rehetra amin’ny harena an-kibon’ny tany hiditra amin’ny ara-dalàna sy hanaja ny lalàna velona”. Ankoatra izay, nitsidika toerana efatra ny minisitry ny harena an- kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika nandritra izao fandalovany tao Antsirabe izao : toeram-panodinana vato miisa roa, mpivarotra firavaka ary tsenam-bato tao amin’ny Cercle Mess Antsirabe. Ireo toerana notsidihana ireo izay hiasan’ny mpandraharaha Malagasy madinika amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Taorian’izany rehetra izany, nitafa tamin’ny mpanao gazety avy ao an-toerana ny minisitra Fidiniavo Ravokatra ary nanamafy ny antso avo tamin’ireo mpitrandraka, mpandraharaha sy izay rehetra misehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany “mba hanara-dalàna indrindra fa ho an’ireo mbola miasa amin’ny sehatra tsy ara-dalàna”.